Harry Kane ayaa hoos u dhacay sanadkii la soo dhaafay. Miyay taageerayaasha Spurs walaac ka muujinayaan? - KU SAMEEYAAN NABADA
ACCUEIL » SPORTS Harry Kane ayaa hoos u dhacay sanadkii la soo dhaafay. Miyay taageerayaasha Spurs walaac ka muujinayaan?
Harry Kane ayaa hoos u dhacay sanadkii la soo dhaafay. Miyay taageerayaasha Spurs walaac ka muujinayaan?
Haddii ay ahayd inaad qiyaasto, waxaad u badan tahay inaad heli lahayd magacyada badankood. Inta lagu gudajiray sanadihii 10 sano ee la soo dhaafay, yaa ku jiri doona qeybta ugu sarreysa ee '10' inta badan tallaalada la isku dayay intii lagu jiray xilli ciyaareedkii Premier League?
Liiskani sidoo kale waa soo koobid aad u wanaagsan oo ku saabsan ciyaartoydii ugu fiicnaa horyaalka intii lagu jiray muddadan. Waxaa jira Luis Suarez yaa jira laba jeer . Wayne Rooney waa jiraa. Waa isku mid Cristiano Ronaldo . Frank Lampard iyo Didier Drogba, labada ciyaartoy ee qeexaya waqtigaas, labaduba halkaas ayey ka muuqdaan, iyo sidoo kale Gareth Bale et Robin van Persie . Dhamaan tirooyinka halyeeyada ah, ee awood u leh inay taageeraan kaliya weerarada qaar ka mid ah kooxaha ugu fiican horyaalka.
Ma taqaanaa cidda kale ee ka tirsan kooxdan? Harry Kane - ama ugu yaraan hore ayuu u qabtay kahor
- ESPN Ultimate XI: Kooxdaani waxay ku guuleysatey inay wax walba guuleysato
- Ian Darke: si ay u aflagaadeeyaan Man City iyo Liverpool xilli ciyaareedkan?
- Graham Hunter: Halyeeyga Samuel Eto'o
2017-18, Kane wuxuu qabtay kubadaha 184. Tan iyo 2008, oo dib ugu noqota illaa iyo inta laga helayo xog-ururinta TruMedia, kaliya Suarez (187 ee ololaha 2012-13) ayaa isku dayay in ka badan. Sida Suarez, Kane ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee haysta labo xilli ciyaareed inuu ku jiro kooxda ugu sarreysa 10, korkiisa 158 15 tuurista 16 wuxuu ku habboon yahay darajada 10, ma ahan in la xuso sanadkii la soo dhaafay.
Dhowr usbuuc ka hor, Waxaan u xushay Kane inuu yahay weeraryahankii ugu fiicnaa horyaalka xilli ciyaareedkii 16-17 . Sannadkaas, wuxuu noqday mid ka mid ah lix ciyaartoy sannadan si uu uga gudbo barta 1,00 oo aan lahayn goolal rigoore, oo lagu daro caawimaad daqiiqado 90 ah haddii Mohamed Salah Ma uusan soo aruurin weeraryahankii ugu fiicnaa Premier League xilli ciyaareedkii aan xiriir la laheyn Luis Suarez, waxaan sidoo kale dooran lahaa Kane sannadka soo socda. Iyada oo goolashiisa 28 aan rigoore lahayn, Kane waxaa ka sarre maray oo keliya Suarez iyo Salah (31) intii lagu jiray tobankan sano. Isugeyntiisa Xilliyada 52 laga bilaabo 2016 illaa hadda waa isugeyn isdaba joog ah oo ugu wanaagsan ee 10 sanadihii la soo dhaafay. isku mid ayaa run ah haddii aan dib u dhigno sanadka saddexaad. Wuxuu dhaliyay goolal 72 isagoon rigoore ka dhicin 2015 ilaa 2018, mana jiro seddex xilli ciyaareed kale oo tartan xitaa xitaa u soo dhawaaday.
Dhamaadka xilligii 17-18, Kane wuxuu jiray kaliya 25 sano wuxuuna weli ka maqnaa sannado. In kasta oo Tottenham aysan ku guuleysan koobab, kor u kaca ayaa ku soo beegmay imaatinka Spurs afarta sare ee Premier League iyo joogitaankooda aaggan. Wuxuu horay u noqday halyey caan ah oo sarreeya, isagoo ku guuleystay laba kabo dahab ah oo isku xigta.
Kane si wanaagsan ayuu England ugu shaqeeyaa, laakiin yoolalka iyo saameynta ayaa aad uga adkaatay sidii loo gaari lahaa Tottenham, gaar ahaan 2019. Charlotte Wilson / Offside / Offside iyada oo loo marayo Getty Images
Kane wuxuu ahaa superstar dhab ah awoodna u leh inuu xitaa fiicnaado. Sida Lampard, Rooney iyo Steven Gerrard isaga ka hor, waxa uu noqon doonaa nooca ciyaartoy qaaradaha sida Real Madrid iyo Barcelona ay iskudayaan inay ka fogaadaan Premier League.
Marka laga reebo . Kane hadda ma ahan ciyaaryahankan ilaa dhamaadkii 2018. Oo waxaa laga yaabaa xitaa ka hor.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Kane wuxuu dhaliyay goolal 13 aan rigoore aheyn, wadar ahaan waxaa isbarbar dhigay ciyaartoy sida Yakubu, Gabriel Agbonlahor, Andy Carroll Peter Odemwingie iyo Grant Holt. Marka la eego waxqabadka liita ee Tottenham intii lagu jiray qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore ee Premier League iyo dhibaatooyinkooda ku aadan bilaabashada 2019-2020, mustaqbalka tababarahooda, Mauricio Pochettino, ayaa kiciya su'aalo badan, iyo sidoo kale xiddigo waaweyn sida . Christian Eriksen Jan Vertonghen et Toby Alderweireld kuwaas oo haysta hal sano oo qandaraas ah. Laakiin su'aasha ugu muhiimsan ee kooxda soo socota ayaa runtii ah tan: maxay ka heli doonaan Harry Kane?
Halkan waxaa ah yoolka Kane xilli xilliyeed iyo soosaarista yoolalka la filayo, daqiiqadaha 90:  Halkanna waa soosaarka toogashadiisa:
Maxaan baran karnaa? Marka lagu daro 2017-2018, Kane waxqabadka hoose wuxuu ahaa mid si isdaba joog ah u joogto ah. Inta lagu gudajiray afartii xilli ciyaareed ee kale oo buuxda bilowga (ma tirinaayo xilligan qeyb ahaan ah), wuxuu sameeyay qiyaas isku mid ah oo ah durisyo tayo u dhigma. Sababta ay u dhaqan tahay ujeedada 2016-17 waa, oo ay sameyneysaa, run ahaantii waxay ka soo hagaageysaa 17 illaa 18 waa in Kane uu sii wado geeska jebinta.
Marka loo eego TruMedia's post-toogashada moodada 'XG', Kane toogashadiisa (taasi waa, meeshii uu kubada dul dhigay goosha) uu ku dar dar aad u weyn 0,2 xG toogashadiisa daqiiqadihii 90. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka ayaa ah mid aan la saadaalin karin sannad ka sannad iyo inta badan ciyaartoydu waxay ku qiimeeyaan tirooyinka 'xG', oo u oggolaaday Kane inuu gaaro isla sare sanadka soo socda sababtuna tahay tirada badan ee tallaalada. Sannadkii hore wuxuu soo saaray natiijooyin heer-caalami ah geeddi-socod aan la sii wadi karin, waxayna u muuqatay inuu helay hab uu natiijada ku sii adkeeyo.
Tani, dabcan, ma aysan dhicin.
Kaliya fiiri hoos u dhaca weyn ka dib xilligii 2017-18. Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Kane wuxuu duubay bartilmaameedka ugu hooseeya, goolkiisa iyo heerka xG ee xirfadiisa. Daqiiqad kasta oo 90 ah, wuxuu helay lambarka shanaad ee ugu sarreeya ee gooldhalinta, wuxuu duubay lambarka sagaalaad ee ugu badnaa ciyaaraha wuxuuna dhaliyay tirada goolasha ugu sareysa ee 12. Wuxuu ciyaaray kaliya daqiiqadaha 360 ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, laakiin waxba uma muuqdaan inay tilmaamayaan in khadadka isbeddelka uu bilaabi doono inuu tilmaamo jihada ka soo horjeedda, maaddaama dhaqdhaqaaqyadiisa iyo XG ee 90 ay labaduba si weyn uga hooseeyaan kuwa sanadkii la soo dhaafay.
Kani waa kaadhka toogashada ee Kane ee 17-18 xilli. Dhibcaha cagaaran waa goolal, dhibicda weynna, dhibcaha sare ee x waa:
Hadana waa sida ay u egtahay sanadkii hore iyo sanadkaan, wada jir:
Tarjumaadda kor ku xusan, Kane wuxuu yareeyay darbo ka baxsan barta, taas oo u badan tahay wax fiican marka loo eego tirada xaddidan ee ka mid ah. Hadana wuxuu weli heystaa fursado badan oo ka baxsan barta rigoorada iyo gudaha. Dibadda, xiddigo-dhaqameedyadu kuma-liidi karaan cuntada "tap-" ins "oo keliya. Qaar badan oo ka mid ah darbooyinka Kane ee u dhexeeya muddooyinka 6 iyo yacyada 18 waa ay baxeen. Tallaaladan waa adag tahay in la soo maro, maaddaama aaggan uu weli ka buuxo jidh, laakiin asal ahaan qof kasta oo xirfadle sare ah ayaa had iyo goor raadinaya dariiq - ha noqoto kubad bannaanka ku socota, cag-cag cageysan oo adag oo la abuuro booska, si dhakhso ah u sii deyn (19659002) Wixii tixraac ah, fiiri muuqaalka rasaasta ee Robert Lewandowski ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee Bundesliga:  Sharaxa ugu badan ee hoos u dhaca Kane ayaa ah dhaawac. Ku soo laabashada wax soo saarkiisa daqiiqadihii 90 waa inay baabi'isaa saameynta waqtiga lumay, laakiin waxaa lagu doodi karaa in Kane uu soo gaadhay dhaawacyadii bilihii 18 ee la soo dhaafay iyo in waxqabadkiisii ​​uu mar saameeyay garoonka dhexdiisa. (Xitaa kasii daran, taam ahaanshihiisa markasta ma uusan la joogin asxaabtiisa kooxda, la Dele Alli la dhibtoonaya dhaawacyada iyo Eriksen waxay ku bilaabeen si adag bilowgii xilli ciyaareedka.)
Waxbadan ayaa ka socda Ryan O'Hanlon:
- Sergino Dest waa caddeyn u ah horumarka kubada cagta Mareykanka
- Kumaa ahaa weeraryahankii ugu fiicnaa Premier League, 2010-19?
- Maxaa karti u leh karti aad u leedahay inaad la guuleysato koobab
Bishii Marso 2018, Kane wuxuu dhaawacay canqowga intii lagu jiray ciyaar ay la ciyaareen Bournemouth. Waxa uu dhaliyay goolal 24 ah kulankiisii ​​ugu horreeyay ee 28 ee xilli ciyaareedka, laakiin waxa uu maareeyey kaliya lix kale ka dib markii uu ku seegay laba kulan oo uu ka dhaawacmay canqowga. Kadib, halkii uu nasiin lahaa inta lagu jiro xagaaga, wuxuu u ciyaaray England tartamo badan oo Koob Adduun. Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, wuxuu garoomada ka maqnaa sideed kulan oo dhaawac canqowga ah bishii Janaayo iyo sagaal kale sababtoo ah dhaawac kale oo soo gaadhay bishii April. Wuxuu u orday si uu u bilaabo finalka Champions League oo gabi ahaanba waa mid aan waxtar lahayn, isagoo dhaliyay gool laad fudud oo waqtigiisii ​​lumiyey ka dib markii Liverpool ay ku guuleysatay 2 ee 0.
Iyadoo labo kulan oo League ah uu la qaatay England xagaagii hore, Kane waqti uma dhumin. Runtii waqti badan uma helin inaan bogsado. Haddii uu waligiis taas helo, waxaan arki karnaa nambaradiisa oo bilaabaya inay garaacaan naadigiisa.
Si kastaba ha noqotee, Tottenham waxay si dhakhso ah ugu adkaysatay in Kane aan lagu dhaawicin baahida, iyo ciyaar kasta, nooca fiican ee Kane ayaa sii soconaya.
Kane wuxuu ku daray afar kaalmooyin ah sanadkii hore si uu u bilaabo qaar ka mid ah hoos u dhaca tirada dhibcaha. Si kastaba ha noqotee, waxsoosaarkiisa oo dhan oo aan go'nayn - fursadaha ayaa abuuray, Thanks to kubadaha la ciyaaray, baasaboorada guuleysta ee seddexaad ee ugu dambeysay - ayaa xasilloonayd ama waxyar hoos u dhacday. Waxaa macquul ah in isku xigxiga nabarrada ay ka dhigan tahay in odaygii hore ee Kane uusan waligiis soo laaban doonin. Waxa kale oo suuragal ah in Kane uu ku noolaan doono laba sano oo isku xigta oo xirfadiisa ah - mid ayaa dhammaystirta iyo mid dhammaystiraya waxqabadkiisii ​​guud - iyo in heerkiisii ​​dhabta ahaa uu ahaa meel la barbar dhigo tii sanadkii hore. Waa ciyaaryahan aad u wanaagsan Premier League, laakiin ma ahan gooldhaliyaha heerka caalami ee adduunka.
Marka la eego ilaha dhaqaale ee kuwa ugu dhow ee kula tartamaya England iyo Yurub, Tottenham waxay ahayd inay ka baqaan inay lumaan halyeeygooda hal maalin. Waa shaki, si kastaba ha noqotee, inay u maleeyeen inay sidan ku dhici doonaan sidan.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/english-premier-league/story/3940334/harry-kane-has-declined-over-the-past-year-should-spurs-fans-be-concerned
Maxaad ka aragtaa horyaalada kubada cagta Yurub isbuucaan
Madaxweynaha Horyaalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka uu shaaca ka qaaday been abuur